Yan Aung: Mother ကြီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်ဗျာ.
I talked to my mom this evening using Skype software. She is doing well and looks better than last year. I didn't even notice how much the time is consumed while I was talking to my mom. When I did, it's nearly midnight. My sister is still chatting with her friend.
Break the news to your buddies if they are living near Myaynigone. A new internet cafe is opened near Seit-Tain-Kya Teahouse, Thu Kha Street. The connection looks good as it can handle the webcam very well without losing the signal.
And I said 'hi' to my friend who just came back from Burma. Hopefully, she will send me the food given by my mom next week. Thinking about food, I can't help myself having supper now. Wanna join? Haha.
ခုနက Mother ကြီးနဲ့ online မှာ စကားပြောဖြစ်တယ်။ Mother ကြီးနေကောင်းပါတယ်။ ၀လည်းဝလာတယ်။ သားအမိနှစ်ယောက် ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ စကားပြောလိုက်ကြတာ ၁၂ နာရီထိုးသွားတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။ အစ်မကတော့ online မှာ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ chat နေတုန်းပဲ။ မြေနီကုန်းနားမှာနေတဲ့သူတွေကို လက်တို့လိုက်ပါဦး။ သုခလမ်းထိပ် စိတ်တိုင်းကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နားမှာ ဆိုင်အသစ်ဖွင့်တယ်လို့။ Bandwidth ကျယ်ပုံပဲ။ Webcam တောင် ကောင်းကောင်းနိုင်တယ်။
ပြီးတော့ online မှာမြန်မာပြည်ကပြန်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုတွေ့လို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်။ နောက်တစ်ပါတ်လောက်ဆိုရင်တော့ စားစရာတွေကို စာတိုက်ကထည့်ပေးလိုက်မယ်နဲ့တူပါတယ်။ ပြောရင်းနဲ့တောင် ဗိုက်ထဲက ဆာတာတာ ဖြစ်လာပြီဗျာ။